သံတိုင် S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.
November 9, 2018, 4:45 am / aecbusiness37158.pointblog.net
လမ်းမီးတိုင်၊ နေရောင်ခြည်(ဆိုလာ)လျှပ်စစ်တိုင်၊ စီစီတီဗွီတပ်ဆင်သည့်တိုင်မျိုးစုံ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း။ သံပြားမှထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ခိုင်ခံ့ တာရှည်ခံ စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မှီသည့်သံမီးတိုင်ရပါသည်၊ 2316-2549 ခုနှစ်မှာ စက်ရုံမှ စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မှီမှု ထောက်ခံချက်ရရှိထားပါသည်။
S.S.M. Industryသည် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း sector များတွင် သဘာဝစွမ်းအင် (ဥပမာ-နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်)ပရောဂျက်များကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွနုပ်တို့ ကုမ္ပဏီသည် အဆိုပါလုပ်ငန်းများအတွက်အပိုပစ္စည်းများ(ဝါယာငုတ်များ၊ဆိုလာ ဆလ်များ) နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်နေသော ကုမ္ပဏီတခု ဖြစ်ပါသည်။
S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have check here excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com
Comments on “သံတိုင် S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.”